Immisa ayey Bixineysaa Bixinta Baahinta Bulshada? | Martech Zone
Toddobaadyadan ugu dambeeyay, waxaan falanqeynaynay alaabada iyo adeegyada aan u fidino macaamiisheenna. Hay'ad ahaan, waxaan haynaa xoogaa dhaqaale oo baaxad leh oo aan kula shaqeyneyno qalab iyo khibrad aan kula wadaagi karno macaamiisha - laakiin faa iidooyinkaas waa in ay weli bixiyaan qiimaha dheeraadka ah ee lagama maarmaanka u ah la jaanqaadidda qiimaha hay'adda. Waxaan shaki yar ka qabnaa in shaqaalaha gudaha ay u dhigmi karaan natiijooyinka aan ku guuleysanayno kharash u dhigma macaamiisheenna.
Weli, qiimaheena ma uusan aheyn mid waafaqsan celceliska warshadaha. Qaar ka mid ah adeegyadeena, waxaan ku dallacnay wax badan waxaanan dareemnay raaxo marka la eego tayada shaqadayada. Adeegyada kale, waxaan ku dallacnay wax aad ugayar oo si daacadnimo ah ayaan uga fogaannay noocyadaas ka mid noqoshada macaamiisha. Mid ka mid ah adeegyadaas wuxuu ahaa baraha bulshada. Warbaahinta bulshada maahan nidaam iswada. Warbaahinta bulshada waxay u baahan tahay kormeer, taageero, koritaan, wacyigelin, dallacsiin, ka qeyb qaadasho, falanqeyn, is dhexgal, suurtagal ahaan tartamo iyo xitaa dalacsiin lacag leh.
Istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee wax ku oolka ah waxay u baahan tahay dadaal joogto ah iyo xoog si loo gaaro dardar iyo natiijooyin ka sarreeya. Taasi waxay u baahan tahay shaqaale karti leh oo si joogto ah u raadinaya fursado.
Miisaaniyadda Warbaahinta Bulshada
Ingraphicgraphic this, Sida Ugufiican ee Loogu Bixinayo Miisaaniyadaada Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada, Salesforce Canada waxay baareysaa kharashaadka lagu fulinayo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada.
Adeegyada suuqgeynta xirfadeed waxay socon karaan inta u dhexeysa $ 4,000 iyo $ 7,000 bishii. Maaddaama wadarta guud ee miisaaniyaddaada suuqgeynta ay u dhexeyso 10% guud ahaan dakhligaaga, iyo suuqgeyntaada dijitaalka ahi waa qeyb la taaban karo, suuqleyda waa inay go’aansadaan sida ay u qorsheynayaan inay u maareeyaan xisaabaadka warbaahinta bulshada. Ikhtiyaarrada ugu caansan ayaa ah in la shaqaaleeyo maareeyaha warbaahinta bulshada, shirkad suuqgeyn yar, ama wakaaladda suuqgeynta shirkadaha
Warbaahinta bulshada meelna uma socoto. Xaqiiqdii, miisaaniyadaha warbaahinta bulshada waxaa la saadaalinayaa inay 90% kordhi doonaan 5-ta sano ee soo socota Shaki kuma jiro in badan oo tani ay ugu wacan tahay kakanaanta kanaallada, kororka tartanka, iyo baahida loo qabo isdhexgalka 1: 1.
Tags: b2b warbaahinta bulshadab2c baraha bulshadahubkaaFacebookforumskooxaha googleInstagramLinkedInFiidiyowyada Suuqgeyntabixintawadaagista sawirkaPinterestpodcastingiibinta canadacalaamadeynta bulshadawarbaahinta bulshadamiisaaniyadda warbaahinta bulshadakharashka warbaahinta bulshadaMedia Social Suuqmiisaaniyadda suuqgeynta warbaahinta bulshadaka bixitaanka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada roifiidiyowga warbaahinta bulshadaTwittervideos
Sida Loogu Hormariyo Waxqabadka Kooxdaada Iibka